CISSP စာမေးပွဲ့ Prep – အဆိုပါ InfoSec စာမေးပွဲတွင် Crush
CISSP စာမေးပွဲ့ Prep
CISSP တစ်ဦးအပါအဝင်တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်အိုင်တီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးတကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ် 75% မှန်ကန်သောမေးခွန်းတွေအချိုး. ထို U.S ကြောင့်အရာရှိတဦးကမွေးစားအတူ. သူတို့ရဲ့ Dodd အတွက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာန 8570 လက်မှတ်နှင့်ကို ANSI ISO / IEC အသိအမှတ်ပြု, ထို CISSP သတ်မှတ်ရေးသင်အိုင်တီအတွက်အလုပ်အကိုင်အရသို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကိုကူညီနိုင်မယ့်အဖိုးတန်လက်မှတ်ကိုကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ် IS.
ကျော်နှင့်အတူ 93,000 အတွက်လက်မှတ်ကလူ 149 နိုင်ငံပေါင်း, ထို CISSP ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံနှုန်းဖြစ်ပြီးတခါတရံအလုပ်ရာထူးလိုအပ်သည်. သင်သည်သင်၏ CISSP သတ်မှတ်ရေးဝင်ငွေစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, အောက်ပါလက်မှတ်သင့်ရဲ့ path ကိုအပေါ်သင့်ကိုကူညီနိုင်ပါ.
ထို CISSP ဘာလဲ?
အဆိုပါ CISSP လက်မှတ်သို့မဟုတ်လက်မှတ်ရသတင်းအချက်အလက်စနစ်များလုံခြုံရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်အိုင်တီ၏အကွာအဝေးမှာအလုပ်မလုပ်ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီသောဖြစ်ကြောင်းကိုအလားအလာကိုန်ထမ်းပြောပြနှင့်လယ်ယာ IS အနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်, လုံခြုံရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်မန်နေဂျာအပါအဝင်လယ်ကွင်းနှင့်အတူ, အိုင်တီဒါရိုက်တာ, သုံးသပ်သူများ, စနစ်တွေအင်ဂျင်နီယာများ, နှင့်ပို.
သည်စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ 8 domain များနှင့် 250 မေးခွန်းများကို, စမ်းသပ်မှုကျယ်ပြန့်သည်နှင့်လေ့လာမှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်. သို့သော်, ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးကို ANSI ISO / IEC အသိအမှတ်ပြုသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်, အရာအများအပြားအိုင်တီအတွက်အလွန်မြင့်မားဖွယ်စေသည်နှင့်အလုပ်အကိုင်အဖွင့် IS, အထူးသဖြင့် U.S သည်. အစိုးရ, ၎င်း၏လက်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများအတွက် CISSP ကို​​အသုံးပြုသည်အရာ.
သင် CISSP လက်မှတ်ရမှမည်သို့စဉ်းစားနေသည်ဆိုလျှင်, သင်အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုသုံးနိုင်သည်. CISSP လိုအပ်ချက်များကိုအလုပ်အတွေ့အကြုံငါးနှစ်အတွင်းသို့မဟုတ်အလုပ်အတွေ့အကြုံနှင့်တစ်ဆက်စပ်လယ်ပြင်၌တစ်လေးနှစ်သို့မဟုတ်မြင့်မားဒီဂရီ၏လေးနှစ်ပါဝင်. သင်သည်လည်းဂိုးသွင်းဖို့ရှိ 700 တစ်ဦး၏အမြင့်ဆုံးနှင့်အတူသို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား 1000 နိုင်ပြီ. နှင့် 250 အပါအဝင်မေးခွန်းများကို 20 စာရင်းအင်းမေးခွန်းတွေ Non-ဂိုး, လောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဤပျမ်းမျှ 75% မှန်ကန်သောအဖြေကို.
သင်စမ်​​းသပ်လွန်တပြိုင်နက်, သင်ပလီကေးရှင်းများအရာကြွင်းလေဖြည့်စွက်ရန်ကိုးလများ, အရာတခုကနေအရေးပါသောအချက်တစ်ရပ်ရတဲ့ပါဝင်သည် (ISC)²အဖွဲ့ဝင်, အဆိုပါလျှောက်လွှာပုံစံကိုဖြည့်အတည်ပြုချက်ရယူခြင်းနှင့်ကျင့်ဝတ်၏ code ကိုမှ subscribe. သင်သည်လည်းအတူသုံးနှစ်သင့်ရဲ့ CISSP သက်တမ်းတိုးရှိသည် 40 CPE ဆက်လက်ပညာရေးတစ်နှစ်လျှင်ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးစုစုပေါင်း 120 သုံးနှစ်အတွင်း.
အဆိုပါ CISSP ကုန်ကျစရိတ် $549 အပြည့်အဝကိုခြောက်နာရီကြာစာမေးပွဲတွေအတွက်ကြိုတင်သင်မှတ်ပုံတင်လျှင်. Rescheduling ကုန်ကျစရိတ် $50 နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပယ်ဖျက် $100. သင်သည်လည်းရန်ပုံငွေနှင့်အတူအကူအညီရရန် CITREP ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်. သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုယူဘယ်မှာပေါ် မူတည်., သင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းပေးဆောင်ရရှိစေခြင်းငှါ $50 သင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းသောအခါကြေး processing. သင်သည်လည်းနှစ်စဉ်ပေးဆောင်နေရတယ် $85 CISSP ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကြေး. ဤရွေ့ကားကုန်ကျစရိတ်ကိုလေ့လာနေ၏ကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ် CISSP စာအုပ်များပါဝင်ပါဘူး, စာမေးပွဲနှင့်အတူလာကြဘူးအရာ.
ထို CISSP စာမေးပွဲသည်လေ့လာနေ
ထို CISSP စာမေးပွဲကိုသည်ကိုလေ့လာရန်အရေးကြီးသည်က, သင်ပြီးသားသင့်ရဲ့လယ်ပြင်၌ကြုံတွေ့နေကြသည်ကိုပင်လျှင်. အဆိုပါ (ISC)²အချို့ gratuitous လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများကမ်းလှမ်း, ဒါပေမယ့်ရွေးချယ်စရာအများစုအခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး. CISSP လေ့ကျင့်ရေးရွေးချယ်စရာကနေဟာယပူဇော်သက္ကာကိုထည့်သွင်း (ISC)²အဖြစ်တတိယပါတီသင်ပေးသောဆရာနှင့် prep သင်တန်းများအသိအမှတ်ပြု.
CISSP စာအုပ်တွေအလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်, အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲနှင့်အဖြေကိုပြိုကွဲ. အဆိုပါတရားဝင် (ISC)ထို CISSP မှ²လမ်းညွှန် hardcover အတွက်လွယ်ကူ Self-လေ့လာမှု access ကိုတစ် eBook အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်. သင်သည်လည်းတစ်ဦးအလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှု app ကို download လုပ်နိုင်, အရာ၏အသီးအသီးတိုတောင်းသောအလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုသည်စွဲချက် 25 မေးခွန်းများကို.
သင် Self-လေ့လာမှုနှင့်အတူအကောင်းမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ထို့နောက်တတိယပါတီ CISSP prep သင်တန်းအခြား option တစ်ခုဖြစ်သည်. ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့် CISSP စာအုပ်များပါဝင်, အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲ, စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းဘဏ်တွေ, တခါတရံနည်းပြဆရာသို့မဟုတ်နည်းပြဆရာအကူအညီ. အဆိုပါ (ISC)²အဖြစ်ကောင်းစွာအများအပြားက e-လေ့လာသင်ယူခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း, ကို 'လုံး E-Learning သင်တန်းအပါအဝင်’ အတွက် $599 သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းသင်တန်း module တွေ $99 အသီးအသီး, အရာသင်တယောက်ဒိုမိန်းသို့မဟုတ်ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်တက်တိုက်များရှိမရှိအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်နိုင်ပါသည်.
ရှိပါတယ် 17 ထို U.S အတွက်တာဝန်ရှိသူတဦးက CISSP လေ့ကျင့်ရေးပံ့ပိုးပေး. အဖြစ်ကပိုနက်ရှိုင်းသော e-လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်နည်းပြဆရာသင်တန်းနှင့်အတူမျိုးစုံတတိယပါတီပံ့ပိုးပေး. CISSP အလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုတာဝန်ရှိသူထံမှရရှိနိုင် (ISC)² app ကိုနှင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်သို့မဟုတ်တတိယပါတီ apps တွေကနေတဆင့်. ကိုလည်းသင်ကနေအခမဲ့တချို့အလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေနှင့်စာမေးပွဲဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် (ISC)²ဝက်ဘ်ဆိုက်.
အကောင်းဆုံး CISSP အွန်လိုင်းသင်တန်းများကိုကြည့်ပါ.
ထို CISSP စာမေးပွဲရိုက်ခြင်း
အဆိုပါ CISSP စာမေးပွဲကိုပါဝင်သည် 250 ဦးရေအများဆုံးရှိယူမေးခွန်းများကို6နာရီ. သင်အပါအဝင်ရှစ် domains များပတ်ပတ်လည်အခြေပြုသင်ယူလေ့လာ:
အသီးအသီးဒိုမိန်းတိကျတဲ့အာရုံစူးစိုက်အတူမျိုးစုံ module တွေသို့တက်ကွဲပြား၏, သင်တခါမှာတိကျတဲ့ဧရိယာ၌ရှိသမျှကိုဖြေဆိုရန်ခွင့်ပြု. အများစုကမေးခွန်းတွေအများအပြားရွေးချယ်မှုများမှာ, သင်တို့မူကား, သင်တို့ကိုလည်းစာမေးပွဲယူရန်ရွေးချယ်သည့်နေရာပေါ် မူတည်. စာဖြင့်ရေးသားမေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုဖို့တောင်းစေခြင်းငှါ,. ရှိပါတယ်နေစဉ် 250 မေးခွန်းများကို, သာ 230 သူတို့ထဲကအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောနေကြတယ်, နှင့်ကျန်ရှိနေသေးသော 20 စာရင်းအင်းများမှာ, သင်တို့မူကားပြီးပြည့်စုံအောင်မြင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မှန်ကန်သောရဖို့ရှိ 1000 နိုင်ပြီ.
အများအားဖြင့်, သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ရလဒ်များကို checkout ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာထွက်ပေးအပ်ကြသည်, သင်စာမေးပွဲပြီးအောင်ချက်ချင်းပြီးနောက်. သို့သော်, လက်ငင်းရလဒ်များကိုရရှိနိုင်မဟုတ်လျှင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်ရှစ်ပတ်ကြာဦးရေအများဆုံးအတွင်းမေးလ်ကနေတစ်ဆင့်သူတို့ကိုလက်ခံရလိမ့်မည်.
သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်အလုပ်အကိုင်နှင့်ပညာရေး၏သက်သေအထောက်အထားနှင့်အတူ CISSP လျှောက်လွှာအတည်ပြုချက်ရယူခြင်းဖြည့်စွက်နိုင်, သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ရမှတ်များ, တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးထောက်ခံ (ISC)²အဖွဲ့ဝင်. သင်စာမေးပွဲကျရှုံးသင့်ပါတယ်, သင်တို့အထဲ၌နောက်တဖန်ပြန်လည်ယူမှပေးချေနိုင် 30 ရက်ပေါင်း, တစ်ဦးတည်းနှစ်တာကာလအတွင်းသုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်.
CISSP designated တစ်ဦးချင်းစီကလုံခြုံရေးအတိုင်ပင်ခံအပါအဝင်အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအရေအတွက်သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီ, လုံခြုံရေးမန်နေဂျာ, အိုင်တီဒါရိုက်တာနှင့်မန်နေဂျာ, လုံခြုံရေးစာရင်းစစ်, လုံခြုံရေးဗိသုကာ, လုံခြုံရေးသုံးသပ်သူများ, လုံခြုံရေးစနစ်များအင်ဂျင်နီယာများ, အကြီးအကဲသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအရာရှိ, လုံခြုံရေးဒါရိုက်တာ, network ကိုဗိသုကာ, နှင့်ပို. ရရှိနိုင်သည့်အလုပ်အကိုင်ကိုအလွန် CISSP ပုံစံတခုသည်ကွဲပြားသောကြောင့်,, လစာအဆင့်ဆင့်အဖြစ်ကောင်းစွာအတော်လေးနည်းနည်းကွဲပြား, ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ထံမှအထိ $60,000-$120,000 တစ်နှစ်လျှင်.
အဆိုပါ CISSP တစ်လေးစားဖွယ်နှင့်ကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်တယောက်အိုင်တီအတွက်သင့်ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်သင့်ကိုကူညီသို့မဟုတ် IS နိုင်ပါတယ်ရှိခြင်း, အဘယ်သူမျှမကိစ္စခင်ဗျားလိုက်ရှာနေကြတယ်ဆိုတာကိုအနေအထား. စာမေးပွဲသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့လာနေနှင့်ပြင်ဆင်နေသင်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှရမှတ်နှင့်အတူလွန်သွားပြီးသောသေချာသည်ကအရေးကြီးတယ်. ပိုပြီး CISSP Get နှင့် ဒီနေရာမှာဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်.
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-1.png 500 500 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-01-10 22:00:00CISSP စာမေးပွဲ